Olee otú Download iTunes Radio na-Android o
> Resource> iTunes> Olee Otú Ị Pụrụ Download iTunes Radio na-Android
iTunes Radio, nakwa utu aha iRadio, bụ ọhụrụ gụgharia music ọrụ merged n'ime iTunes na awade a mma ahụmahụ nile music ndị hụrụ. Ị nwere ike ime ka ọtụtụ n'ime ya music ego ma na-gị onwe gị na ahaziri ọdịnaya ka ndị kasị ibu ókè.
Ma i nwere ike na-atụ anya ihe ka ihe atụ, na-ege ntị iTunes redio music na gị Android ngwaọrụ. O yiri obere emegiderịta ebe iTunes akwadoghi Android ngwaọrụ. Ma ị pụrụ ime ya na-esonụ app- gụgharia Audio teepu. Akpa eji nke a usoro ibudata iTunes Radio music na kọmputa gị na mgbe ahụ kpọmkwem nyefee music gị Android ngwaọrụ. Ị adịghị mkpa iji tọghata music faịlụ n'ihi ebudatara iTunes Radio music bụ na MP3 usoro. Ike na-eche ịhụ otú ime ya? Ebe a ọnọde a zuru ezu ndu na mfe nzọụkwụ n'okpuru.
1 Wụnye a Android iTunes Radio Downloader
Get a Downloader site na ịpị Download njikọ n'elu na wụnye ya. Họrọ a nri version dị ka gị na kọmputa. Abụọ ndị a na nsụgharị na-arụ ọrụ a yiri ụzọ nke anyị ga-dị nnọọ elekwasị anya na windows version na atụ ndị na-esonụ na usoro.
2 Record iTunes Radio ka Android
Na-agba ọsọ a smart Downloader mgbe nwụnye. Ị gaghị agbaghara nnukwu Record bọtịnụ na n'elu aka ekpe nke usoro ihe omume. Pịa ya iji nweta njikere na mgbe ahụ na-egwu iTunes Radio music-amasị gị. The nkeji e ụda site na kọmputa gị, nke a Downloader ga-amalite idekọ ya.
Na-egwuri egwu dum iTunes Radio ojii na a njuaka songs na ị ga-egwu niile iche iche dị ka ogologo oge dị ka i nwere ezi njikọ Ịntanetị.
3 Nyefee iTunes Radio ka Android
Mgbe music ebudatara na ọ bụ oge na-etinye ha n'ime gị Android ngwaọrụ. Chọta faịlụ na Library taabụ na nri-pịa songs ị chọrọ nyefee. Wee họrọ Open na nchekwa aka ịchọta niile music faịlụ. Fanye gị Android ngwaọrụ na kọmputa na-idetuo music faịlụ ka ya nchekwa. Ugbu a ọ mere.
Tịm fiọk: Ị nwekwara ike ime ka ụdaolu si nke ebudatara music na-azọpụta ka Android igwe. Pịa mgbịrịgba na akara ngosi na music item na bee otu akụkụ na a mmapụta bitmap na ala.
Nnọọ mfe, nri? Na a usoro, ị nwere ike ibudata niile music on iTunes Radio na-ege ntị ha na gị na Android ngwaọrụ. Ke adianade do, ị pụrụ ime ka ụdaolu. Ị kwesịrị ị na-enye ya a na-agbalị na ike nweta ihe ịtụnanya.